जन्ती लिएर बेहुलीको घर पुग्दा ढोकामा ताला, बेहुलीसहित पूरै परिवार गायब ! – Post Patrika
यस्तो छ तपाईको बिहिबारको भाग्य, फागुन २० गतेको राशीफल हेर्नुहोस्
मुख्य पृष्ठ /News/जन्ती लिएर बेहुलीको घर पुग्दा ढोकामा ताला, बेहुलीसहित पूरै परिवार गायब !
काठमाडौं। बिहेको दिन बेहुला जन्ती लिएर बेहुलीको घर पुग्दा बेहुलीको घरमा ताला लागेको पाइएपछि बेहुला जिल्ल परे । घरको ढोकामा ताला लागेको थियो र बेहुलीसहित पूरै परिवार बेप’त्ता थिए । एकछिन त बेहुला, उनको परिवार र जन्तीहरु अलमल्ल परे त्यसपछि बेहुलीका परिवारलाई फोन गरे । बेहुलीसहित परिवारका सदस्यको फोन स्विच अफ थियो । अन्ततः बेहुलाका परिवारले पुलिसमा आफूहरुलाई धो’का दिइएको उजु’री गरेका छन् ।
घटना भारतको पंजाब राज्यको मोगा जिल्लाको हो । भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार करिब १ महिना पहिले हरजिंदर सिंहको बिहे मोगा जिल्लाको रेडवा गाउँकी युवतीसँग तय भएको बेहुलाको परिवारले बताएका छन् । बिहेको १ दिन पहिले बेहुलीको परिवारको तर्फबाट सगुन पनि पठाइएको थियो । सोमबार बिहान जब हरजिंदरको जन्ती निस्किन लाग्दा केही व्यक्तिहरुले युवतीको पहिले नै कानुनी बिहे भइसकेको बताएका थिए ।
ती व्यक्तिहरुले त्यतिबेला बेहुली नाबालिग भएका कारण उनका पतिलाई सजाय पनि भएको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि हरजिंदरको परिवार जन्ती लिएर बेहुलीको घरमा पुगे । बेहुलीका परिवारलाई फोन गर्दा उनीहरुको फोन पनि अफ पाइएपछि बेहुलाको परिवारले उ’जुरी गरेर बेहुलीको परिवारमाथि का’रवाहीको माग गरेका छन् ।
वीरगञ्जमा आजबाट अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी
पुर्वप्रेमीसंग बिछोड भएर केहि दिनअघि नयाँ प्रेमीसंग बिवाह गरेकी नेहालाइ फेरी आइलाग्यो यस्तो आपत
निर्वाचनको लागि ९८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने